कस्तो छ नेपालमा इन्जिनियरको वर्तमान अवस्था ? - Engineers Post
ई. प्रा.डा त्रिरत्न वज्राचार्यJuly 18, 2021
पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक विकासलगायत हरेक क्षेत्रका लागि सबैभन्दा बढी अवसरहरु भएको मुलुक हो, नेपाल । यि विविध क्षेत्रमा इन्जिनियरको भूमिका र अवसर महत्वपूर्ण रुपमा नै रहन्छ ।
नेपाली इन्जिनियरले स्थानीयस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै ख्याति प्राप्त गरिरहेका छन् । विकसित मुलुकदेखि अल्प विकसित मुलुकहरुमा माथिल्लो ओहदामा नेपाली इन्जिनियरहरु पुगेका छन् । खाडि मुलुकहरुमा विभिन्न ठूला प्रोजेक्टहरुमा प्रमुख इन्जिनियर भएर काम गरिरहेका छन् । विकासोन्मुख मुलुकहरुका विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा पनि नेपाली इन्जिनियरहरुले टिम लिडर भएर काम गरिरहेका छन् । इन्जिनियरिङको हिसाबले विश्वव्यापीकरणको रुपमा हाम्रो स्तर निकै माथि रहेको मान्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले स्थानीयस्तरका लागि मात्र नभई विश्वव्यापीस्तरमा पनि पुग्न सकिने किसिमले इन्जिनियरहरु उत्पादन गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।
साथै, विगतका वर्षहरुमा भन्दा पछिल्लो समय नेपालले विभिन्न विधामा थुप्रै इन्जिनियरहरु उत्पादन गरिरहेको छ । विभिन्न कार्यको लागि देशभित्र सर्बसुलभ रुपमा इन्जिनियरहरु उपलब्ध छन् । विकास निर्माणमा मात्र नभई इन्जिनियरहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा उद्यमशील बन्दै गएका छन् । यसले इन्जिनियरहरुका लागि थुप्रै अवसरहरु पनि प्रदान गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार निर्माण, प्रविधि विकास, अध्ययन अनुसन्धानका कार्यहरु आदी बढ्दै गएको देखिन्छ । नयाँ ढंगले प्रविधि विकास हुँदै गइरहेको छ । यसमा अग्रज इन्जिनियरहरुको अनुभव समेटेर र नयाँ प्रविधिअनुसार अहिलेको नयाँ र पुरानो पुस्ताले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ ।
नेपालमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रको सुरुवाती अवस्थामा विकास निर्माणको कामहरु मात्र बढी हुने भएकाले सिभिल इन्जिनियर र आर्किटेक्टहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिन्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । यतिबेला विभिन्न इन्जिनियरिङ विधाका व्यक्तिहरु पनि इन्जिनियरको रुपमा चिनिन्छन् । नेपालमा पढाइ भएका र विदेशबाट पढेर आएका इन्जिनियरिङ विधा हेर्ने हो भने नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा करिब ५४ विधा दर्ता भएका छन् । विश्वविद्यालय र संस्थानले पनि विभिन्न विद्यामा विधार्थीहरु उत्पादन गरिरहेका छन् भने सबै विधाका इन्जिनियरहरुले सिभिल इन्जिनियर र आर्किटेक्ट जत्तिकै प्राथमिकता पाएका छन् । साधारण मात्र नभई विषयगत हिसाबले इन्जिनियरहरु अगाडि बढिरहेको पाइन्छ । यसलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालमा इन्जिनियरको अवस्था विगतभन्दा फरक छ । इन्जिनियरहरु पूर्वाधार विकासमा मात्र नभई प्रविधि, सफ्टवेयर, आइटी, एआई, कृषि, बायोमेडिकल आदी विधामा सक्रिय छन् । सबैले सम्मान पाउन थालेका छन् । महत्व बुझ्न थालेका छन् ।
विश्वव्यापीकरण र इन्टरनेटले विश्व सानो भइसकेको छ । त्यसैले पछिल्लो समय स्थानीय रुपमा मात्र नभई विश्वव्यापी अवस्थाबारे पनि नजरअन्दाज गर्नुपर्ने बेला छ । हामीले हाम्रो देशको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्राविधिक जनशक्तीले दिने गरेको योगदानबारे बुझ्नुपर्छ । यसले प्रदान गरिरहेको अवसरहरुबारे पनि बुझ्नुपर्छ ।
सडक, पुल, टनेल, रेलमार्ग, एयरपोर्ट, जलविद्युत केन्द्र, नवीकरणीय ऊर्जा, भवनलगायत संरचना निर्माणमा नेपालका इन्जिनियरहरु सक्रिय छन् । विकास निर्माणमा स्वदेशमै उत्पादित इन्जिनियरहरुले पुगिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, चिकित्सा क्षेत्रको बायोमेडिकल आदीमा विज्ञान मात्र नभई इन्जिनियरिङ क्षेत्रको पनि मुख्य भूमिका छ । त्यसैले यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु आवश्यक रहने हुँदा इन्जिनियरहरुका लागि स्वदेशमै विभिन्न अवसरहरु छन् । त्यसैले हामीले इन्जिनियर उत्पादनमा कमी हुन दिनुहुँदैन । इन्जिनियरहरुलाई बेरोजगार बस्न दिनुहँुदैन ।
इन्जिनियरहरुको उद्यमशीलता बढाउन नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले मेगा बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । इन्जिनियरहरुका लागि बिना धितोमा १५ लाखसम्म ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ । यसबाट धेरै इन्जिनियरहरु उत्साहित पनि छन् । इन्जिनियरहरुले आफ्नो सीप अघि बढाएर उद्यमशील बन्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । एउटा इन्जिनियरले उद्यमशीलता अघि बढाएमा अन्य व्यक्तिलाई पनि रोजगार दिन सक्छ । त्यसैले यसले सबैका लागि राम्रो अवसर प्रदान गर्न सक्छ ।
देशमा विकासका लहरहरु आउने, प्रविधि विकास हुने र अनुसन्धान हुने र राम्रो जनशक्ती तयार पार्न सकिने भएकोले इन्जिनियरहरुले नेपालमै बसेर केही न केही गर्न सक्छन् । रोजगारीका लागि विदेशनु नै पर्छ भन्ने छैन । कम्प्युटर प्रविधिको जमाना छ । यसले रोजगार मात्र नभई विदेशी मुद्रा आर्जनको बाटो पनि खुलाइदिन्छ । इन्जिनियरहरुले उत्साहित भएर काम गर्दा देश विकास हुन्छ ।
चुनौति र समाधान
इन्जिनियरहरुका सकारात्मक पाटोहरु केलाएर मात्र हुँदैन । नेपालमा इन्जिनियरहरुले थुप्रै समस्याहरु पनि भोगिरहेका छन् । सरकारी क्षेत्रमा इन्जिनियरलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो छ । त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रमा पनि इन्जिनियरहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकाससँगै व्यक्तिगत विकासका अवसरहरु पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा काम गर्ने इन्जिनियरहरु अलिक बढी पीडित देखिन्छन् । स्थानीय तहमा इन्जिनियरहरुले नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाइरहेको अवस्था छैन । नेतृत्वदायी भूमिका र कर्मचारीको भूमिकामा रहेका इन्जिनियरहरुको सेवा सुविधा पनि छैन । यसले उनीहरुको पेशा र पदमा प्रोत्साहन नमिले पनि इन्जिनियरहरुले काम गरिरहेका छन् । काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहिँ विभिन्न आरोप लाग्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा हौसलाको सट्टा उल्टै निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । यस्तो हुन नदिन सबै आफ्नो क्षेत्रबाट सचेत भएर लाग्नुपर्छ । पूर्व तयारीहरु अपनाउनुपर्छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिहरु नयाँ र फरक छन् । नयाँ–नयाँ आविष्कार भएका छन् । यस्तो अवस्थामा चाहे पुराना होस् नयाँ पुस्ता सबै इन्जिनियर अपडेट भइराख्नुपर्छ । साथै नेपालमा अध्ययन, अनुसन्धाना कमी छ । इन्जिनियरहरुले अध्ययन, अनुसन्धान गर्छौँ भन्दा सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगरिदिएको अवस्था छ । तथापि, अध्ययन र अनुसन्धानका लागि निरन्तर ज्ञान लिन आवश्यक हुने हुँदा यसको निम्ति एसोसिएसनले स्टाफ कलेजको अवधारणा पनि अघि सारेको छ । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानभन्दा फरक इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज आवश्यक छ भन्दै हामीले पहिलेदेखि नै कुरा उठाउँदै आएका छौँ । यदि स्टाफ कलेज स्थापना गरियो भने सरकारलाई धेरै फाइदा पुग्छ । सरकारको बजेट बच्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका इन्जिनियरहरुलाई नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ इन्जिनियरिङ विधिसँग घुलमिल गराउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अभ्यास गरिने तालिमहरु स्वदेशमै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सरकारी, निजी, गैरसरकारी सबै क्षेत्रका इन्जिनियरहरुलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर स्टाफ कलेजका आवश्यक मस्यौदा ऐनहरु तयार भएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइसके पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विद्यमान अवस्थामा विशेषगरी युवा इन्जिनियरहरुको जोश–जाँगर, सी र उत्साहलाई मर्न नदिन सरकारले पनि उचित वातावरण बनाइदिनु पर्छ । सरकारले सहजीकरणको काम गरिदिनुपर्छ । उचित नीतिहरु निर्माण गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि एसोसिएसनले नयाँ किसिमका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको छ । युवा पुस्ताहरुलाई हौसला प्रदान गर्ने काम गरिरहेको छ । एसोसिएसनले दुईदेखि कार्य क्षेत्रमा खटिने इन्जिनियरहरुको ज्यानको सुरक्षाका निम्ती र इन्जिनियरहरुको परिवार पनि विचल्लिमा पर्न नदिन विमाको सुविधालाई अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहेको छ ।
अर्को भनेको भौगोलिक, वातावरणीय र सांस्कृतिक हिसाबले इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हब पनि बनाउँन सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले नियमनकारीको भूमिका खेलिरहेको छ । ऐन संशोधनमा रहेको इन्जिनियरहरुको लाइसेन्स परीक्षाको व्यवस्था अघि बढेमा एक किसिमको मापदण्डलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
यिनै विभिन्न पाटोहरुलाई केलाउदै अघि बढ्ने हो भने नेपालमा इन्जिनियरहरुले सामना गर्ने चुनौति र समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
(वज्राचार्य नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन्)
इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणअनुसार आर्थिक वर्ष चैतमा सक्नुपर्छ, असारे विकास काम छैन